Karazana, loharanom-pahalalana ary vahaolana amin'ny fitadiavana hosoka amin'ny doka | Martech Zone
Karazana, loharanom-pahalalana ary vahaolana ho an'ny fikarohana ny hosoka amin'ny doka
Talata, Aprily 11, 2017 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Tamin'ny fanadihadiana notarihin'ny Fikambanan'ny mpanao dokam-barotra nasionaly (ANA) ary White Ops, ny fanadihadiana dia naminavina ny vidin'ny mpanao dokambarotra 7.2 miliara dolara tamin'ny taon-dasa. Ary tamin'ny fanadihadiana momba ny doka nomerika amerikana, Siansa momba ny doka rehetra namaritra 8.3% amin'ny doka rehetra ho sandoka, raha oharina amin'ny 2.4% amin'ny dokam-barotra amidy mivantana. DoubleVerify mitatitra fa ny 50% amin'ny doka niomerika dia tsy tazana velively.
Inona avy ireo karazana hosoka amin'ny dokambarotra?
Fametahana dokambarotra (CPM) - manafina doka amin'ny 1 × 1 pixel na dokambarotra mifangaro eo amboniny ny mpisoloky mba hampitombo ny fiheverana hitan'ny dokambarotra eo amin'ny tranonkala.
Fisolokiana amin'ny doka (CPC) - Mamorona tranokala sandoka ny mpisoloky, indraindray mandeha ho azy, izay mampiasa teny fanalahidy lafo isan-tsindry ao anaty atiny hitondrana ireo doka lafo indrindra any amin'ny tranonkalany.
Affiliate (CPA) Ad Fraud (AKA Cookie Stuffing) - Ny tranokala dia aloan'ny mpampiasa manao hetsika matetika, noho izany ny mpisoloky dia mamorona hetsika diso mba hamitahana ny rafi-doka hino fa misy ny hetsika.
Fisolokiana (CPL) fanaovana hosoka amin'ny ad (fisolokiana fiovam-po AKA) - minoa na tsia, ny mpisoloky dia afaka mandoa vola kely kokoa amin'ny mpampiasa hamenoana takelaka noho izy ireo mandray karama amin'ny fiovam-po… ka miteraka fitarihana sandoka sy mahasoa.
Fanindronana doka sy hosoka amin'ny AdWare - Ny mpisoloky dia mampiasa bara fanaovana fitaovana na malware hanaparitahana doka amin'ny traikefa fitetezam-paritry ny tena mpampiasa, ka hamokarana fahatsapana doka bebe kokoa sy tahan'ny tsindry avo lenta.
Domain Spoofing na hosoka momba ny doka voafitaka - manova fandaharana ireo URL an'ny tranonkala ireo mpisoloky mba hiheveran'ny mpanao dokambarotra fa sandoka na piraty na tranonkala vetaveta no tena tranokalan'ny mpanonta malaza.
CMS hosoka - ny mpisoloky dia mijirika na mametraka malware ao amin'ny rafitry ny fitantanana atiny mpamoaka mpamorona izay mamorona ny pejin'izy ireo manokana amin'ny fampiasana domains ara-dalàna tanteraka.
Famitahana indray ny hosoka - Ny bot dia maka tahaka ny mpitsidika tena izy ary mamorona fiheverana sy tsindry amin'ny fampielezan-kevitra miverina mamerina.
Fisolokiana amin'ny fifamoivoizana na hosoka fanitarana ny mpihaino - mividy fifamoivoizana mizarazara be ny mpanonta mba hampitombo ny isan'ny fahatsapana ilaina amin'ny fanatanterahana ny doka.
Raha te-hamaky amin'ny antsipiriany momba ireo karazana hosoka doka ireo ianao dia zahao ny lahatsoratra John Wilpers, Inona avy ireo karazana hosoka doka niomerika?
Vahaolana momba ny hosoka amin'ny doka:
Ireo orinasa telo voalaza etsy ambony ireo ihany koa no mpitarika amin'ny sehatry ny vahaolana Ad Fraud.
Siansa momba ny doka rehetra - nankatoavin'ny Media Rating Council, Vahaolana Integral Ad Science manarona tranokala finday, doka fampiharana anaty finday, birao, fisehoana ary fisandohana hosoka amin'ny doka video. Ny teknolojia fananan'izy ireo sy ny fanatsarana azy ireo dia manome anao fomba hampihenana ny fako amin'ny drafitry ny haino aman-jery amin'ny alàlan'ny fanakanana ny doka tsy hoentina amin'ny pejin-tranonkala hosoka ary hampiatoana ny tolo-kevitra amin'ny fahatsapana diso amin'ny fotoana tena izy.
DoubleVerify Pinnacle - manombatombana amin'ny kalitaon'ny fahatsapana tsirairay atolotra sy ny valin'ny valin'ny kalitao tsirairay. Manamora ny fanapaha-kevitra momba ny fanatsarana koa ny sehatra amin'ny alàlan'ny fanomezana fanadihadiana lalindalina sy sary an-tsary ny fotoana tena izy mba hitondrana ny kalitaon'ny fahatsapanao.
WhiteOps FraudSensor ary MediaGuard - Mamakafaka ny sehatra rehetra ny FraudSensor ary manombatombana ny famantarana famantarana 1,000+. Nankatoavin'i MRC ho an'ny fitiliana fifamoivoizana tsy mandeha amin'ny laoniny (SIVT) be pitsiny. MediaGuard MediaGuard dia API vahaolana izay manombana ny fangatahana fangatahana tolotra na doka amin'ny milliseconds ary manome fiarovana mialoha ny fandrindrana mialoha amin'ny fividianana hosoka.
Momba ny Media Rating Council
Ny MRC dia fikambanana indostria tsy mitady tombom-barotra naorina tamin'ny 1963 izay ahitana orinasa lehibe amin'ny fahitalavitra, radio, pirinty ary Internet, ary koa ny mpanao dokam-barotra, masoivohon'ny dokambarotra ary ny fikambanan'ny mpivarotra izay tanjon'izy ireo ny miantoka ny serivisy fandrefesana izay mitombina, azo itokisana ary mahomby.
Tags: hosoka amin'ny dokatsindrona dokahosoka amin'ny dokahosoka amin'ny dokam-barotraaka hosoka dokahosoka fanitarana ny mpihainocms hosokahosoka fanovanafamonoana cookiehosoka amin'ny dokahosoka amin'ny dokahosoka amin'ny doka cplhosoka amin'ny doka cpmdomain spoofingmanamarina avo roa henydvdv tendronyhosoka amin'ny dokasiansa tsy miankina integraljohn wilpersfisolokiana momba ny doka tsy voadiofitaka amin'ny dokambarotrafamitahana hosoka indrayfamitahana indrayhosoka amin'ny doka fikarohanahosoka amin'ny fifamoivoizanawhiteops
Paikady 8 hanatsarana ny fahombiazan'ny varotrao